Edinson Cavani oo qaatay tababarkiisii ugu horreeyey ee Kooxda Man United… (Miyuu ciyaari doonaa kulanka todobaadkan ee PSG?) – Gool FM
(Manchester) 19 Okt 2020. Saxiixa cusub ee Kooxda Manchester United Edinson Cavani ayaa qaatay tababarkiisii ugu horreeyey ee naadiga ka arrimisa garoonka Old Trafford.
Wiilka cusub ee kooxda Manchester United, Edinson Cavani ayaa dhammaystiray tababarkiisii ugu horreeyey ee kooxda Red Devils tan iyo markii uu ku soo biiray kooxdaas maalintii ugu dambeysay suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaaga.
Xiddiga reer Uruguay ayaa qalinka ugu duugay heshiis hal sano ah kooxda Ole Gunnar Solskjaer kaddib markii uu ka tagay Paris Saint-Germain, halkaasoo uu ku dhaliyey 200 gool 301 kulan oo uu u saftay kooxda heysata horyaalka Ligue 1 intii u dhaxeysay 2013 iyo 2020.
Cavani ayaa lagu qasbay inuu karantiilo kaddib markii uu yimid UK, iyadoo uu socdo cudurka faafa ee Korona Fayras, laakiin halyeyga weerarka ka ciyaara ayaa lagu sawiray isagoo galaya xerada tababarka Carrington Axaddii kaddib markii uu dhammeystiray labo isbuuc oo gooni isu karaantiil ah.
Sidoo kale saxiixyada cusub ee Man United ee Telles iyo Facundo Pellistri ayaa Cavani garab socday oo tababarka kala soo muuqday.
Man United ayaa kulankeeda soo aaddan waxa ay habeenka Talaadada la leedahay Cavani kooxdiisii hore ee PSG kulan qeyb ka ah tartanka Champions League, 33-sano jirkaan ayaa laga yaabaa inuu kulankiisii ugu horreeyay u safto Red Devils kulanka ay wajahayaan bartamaha isbuucaan kooxda ka dhisan caasimadda Faransiiska.
Red Devils ayaa soo martay bilow isku dhaf ah ololaheeda Premier League, laakiin waxa ay soo bandhigeen qaab ciyaareed cajiib ah qeybtii labaad kulankii Sabtidii ay 4-1 uga adkaadeen naadiga Newcastle United.